दुःखको साथी नेपालद्धारा खाध्य सामाग्री वितरण – Pradesh Network
दुःखको साथी नेपालद्धारा खाध्य सामाग्री वितरण
Posted on April 8, 2020 Author pradeshnetwork	Comment(0)
विराटनगर, २६ चैत । दुःखको साथी नेपाल केन्द्रिय कार्यालय विराटनगरले खाध्य सामाग्री वितरण गरेको छ ।
लकडाउनका कारण विपन्न तथा गरिव समुदायलाई समस्या भएकाले विराटनगर ११ पिचराका १ सय ५० घर परिवारलाई खाध्य सामाग्री वितरण गरिएको हो ।
प्रति परिवार १२ किलो चामल, दाल १ किलो, आलु २ किलो, नुन १ किलो, बेसार, सावुन, चाउचाउ वितरण गरिएको दुःखको साथी नेपालका संस्थापक सल्लाहकार भगवान थापाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश १ विराटनगर स्वास्थ्य
प्रदेश नं. १ बाट १० महिला सहित ४६ जनाको नमूना संकलन
Posted on March 31, 2020 Author pradeshnetwork
विराटनगर, १८ चैत । प्रदेश नं. १ बाट कोरोना भाईरस (कोभिड १९) का तीन दर्जन बढीको नमूना संकलन गरिएको छ । आज सम्ममा १० महिला सहित ४६ जनाको नमूना संकलन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नं. १ का प्रवक्ता डा.सुरेश मेहताले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार झापाबाट ५ जना, मोरंगबाट ७ जना, सुनसरीबाट २५ जना, […]
कटहरीको तरकारी अब विराटनगरमा बेचिने
Posted on April 20, 2020 Author pradeshnetwork
विराटनगर, ८ वैशाख । लकडाउनपछि बिक्री बन्द भएको मोरङ कटहरीको तरकारी आजदेखि विराटनगरमा बिक्री हुन थालेको छ । कृषि सहकारी संघले प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसंगको छलफलपछि कटहरीको तरकारी विराटनगरमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । संघका कोषाध्यक्ष राकेश दाहालले मन्त्रालयसंगको छलफलपछि तरकारी तथा फलफुल बजारमा तरकारी भण्डारण गर्ने र कृषकले […]
आइसोलेसनका १५ र क्वारेन्टाइनमा रहेका २३५ फिर्ता
Posted on April 16, 2020 Author pradeshnetwork
विराटनगर, ४ वैशाख । कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा मोरङमा आइसोलेसनमा राखिएका १६ जनामध्ये १५ जना नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि घर फिर्ता भएका छन् । कोशी अस्पताल विराटनगरमा १३ जना र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गोठगाउँमा ३ जनालाई आइसोलेसनमा राखिएकोमा बिहीबारसम्म १५ जना फिर्ता भएको मोरङ प्रहरीले जानकारी दिएको छ । आइसोलेसनमा बसेकाहरुलाई चिकित्सकको नियमित रेखदेखमा उपचार गरिएको थियो […]
स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भए ५० लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा
बालिका बलात्कार गर्ने दुई जना पक्राउ